Booliska Badhan oo ku raad jooga gacan ku dhiigle dil iyo dhaawac dad shacab ah gaystay. – Radio Daljir
Booliska Badhan oo ku raad jooga gacan ku dhiigle dil iyo dhaawac dad shacab ah gaystay.
Janaayo 1, 2012 12:00 b 0
Badhan,Jan 1 -Ciidamada amaanka degmada Badhan ee gobolka Sanaag ayaa ku raad jooga nin hubaysan oo 29-kii bishii December ee sanadkii tagay 2011 kii falal isugu jira dil iyo dhaawac ugu gaystay gudaha degmadaasi laba qof oo ahaa dad shacab ah.
Duqa degmada Badhan ee gobolka Sanaag Cabdirisaaq Axmed Ciise oo waraysi siinayay Radio Daljir ayaa waxaa uu sheegay inay socdaan howlgallo balaaran oo ay ciidamada amaanka ee degmada Badhan kusoo qabanayaan gacan ku dhiiglaha falalka isugu jira dilka iyo dhaawaca ka gaystay magaalada Badhan.
Waxaa uu sheegay gudoomiyuhu ninka dilka gaystay inuu dhoor maalmood uu joogay magaalada Badhan islamarkaana uu kasoo galay deegaan xeebeedka Laasqoray ee isla gobolka Sanaag,isagoona sheegay dilka inuu yimid ka gadaal markii muran uu dhexmaray ninka geeriyooday iyo ninka dilka gaystay,waxaana uu ka gaabsaday gudoomiyuhu inuu faahfaahin ka bixiyo waxa uu salku ku hayay muranka keenay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhacay degmada Badhan.
Gudoomiyaha degmada Badhan Cabdirisaaq Axmed Ciise ayaa dhinaca kale sheegay xaaladda amaan ee degmadu inay xiligaan tahay mid dagan,islamarkaana beelaha ay kasoo kala jeedaan gacan ku dhiiglihii dilka gaystay iyo ninkii la dilay ay si nabadgalyo ay arintan isugu afgarteen in la dhameeyo,si’aysan u keenin isku dhacyo dhexmara labada beelood.
Madaxda Puntland iyo waxgaradka Caluula & Baargaal oo kulan ku yeeshay Boosaaso.
Baahin: Sabti, Dec 31, C/risaaq C. Silfar ~ Daljir ~ Galkacyo. Ciidanka Ethiopia & kuwa Somaliya oo la wareegay Beledweyn; Dawlada federaalka oo iclaamisay hawlgal amni; Odayaasha degamada Garacad oo ku dhaliilay Puntland in ay baylihisay dhul-xeebeedka gobolka Mudug; Guddoomiyaha gobolka Mudug & taliyaha cusub ee ciidanka bilayska oo kormeeray Galbeedka gobolka Mudug.